Jawaari oo Baydhabo u tagey dedejinta Maamulka 3da Gobol ka hor bilowga shirka Denmark ee Bishaan September – idalenews.com
Gudoomiyaha Baarlamaanka DF Mudane Maxmed Shiikh Cusmaan Jawaari ayaa safar horay loosii qorsheeyay maanta oo Isniin ah ku tagay magalada Baydhabo oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen xiisado is-diidan.
Ammaanka magalada Baydhabo ayaa si wayn loo adkeeyay waxana lagu wadaa Jawaari inuu la kulmo qaybaha Shacabka iyo dhinacyadda isku hayo Baydhabo.
Tan iyo markii ay soo shaac baxeen mamulo isku hayo Baydhabo ayaa waxaa magaladaasi kusii badanayay colaada maadama shacabka ay ku kala qaybsameen labadaan mamul oo mid kasta uu sheeganayo Lix gobal iyo Saddex Gobal.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somalia ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inuu dhameeyo xiisadaha siyaasadeed ee iska soo horjeeda si loogu guulaysto dhismaha mamulka Saddexda Gobal oo wali qorshihiisa la wado.
Maalmahan soo socda ayuu Jawaari ku sugnaan doonaa magalada Baydhabo.
Abu Yaasir: Godane wuxuu la shaqeeyaa Sirdoonka Reer Galbeedka